Madaxweynaha Giriiga oo la kalmaya axsaabta waaweyn ee dalkaasi si dowladda isbahaysi ah loo soo dhiso – Radio Daljir
Athans, May 13- Madaxweynaha dalkaasi Giriiga Karolos Papoulias ayaa maanta la kulmaya madaxda 3-da xisbi ee ugu waaweyn dalkaasi Giriiga ,waxana tallaabadani ay qayb ka tahay dadaalkii ugu dambeeyey ee lagu doonayey in lagu soo dhiso dowlad wadaag ah.
Xafiiska madaxweynaha Giirga ayaa sheegay in Mr Papoulias uu marka ugu horreysa la kulmayo hogaamiyaha xisbiga New Democracy Antonis Samaras, kaddibna hogaamiyaha xisbiga Syriza Alexis Tsipras ,waxana uu marka ugu dambeysa ay is arkayaan Evangelos Venizelos oo isaguna ah hogaamiyaha xisbiga Pasok .
Xisbiga muxaafidka ah ee New Democracy, xisbiga midigta-fog ee Syriza iyo kan shuuciga ah ee Pasok ayaa ku guuldarraystay in ay sameeyaan xukuumad wadaag ah,kaddib doorashooyinkii baarlamaanigaa ahaa ee wadankaasi oo labadii xisbi ee dowladdii wadaaga ahaa ku jiray ee New Democracy iyo Pasok ay dhumiyeen aqlabiyadii kuraasta baarlamanka.
Cod-bixintii asbuucii hore ee lagaga adkaaday axsaabtii ku jirtay qorshaha samata-bixinta iyo gunti-giijiska ee dalkaasi Giriiga ayaa khatar ku noqday in dalkaasi Giriigu uu dhumiyo xubintiiisii seyladda dalalka isticmaala lacagta Euro-da ee loo yaqaan aaggga Euro.
Bangiyada dhexe ee reer Europe ayaa xilli hore bilaabay in ay ka doodaan suurtagalnimada ah in dalkaasi Giriigu uu iskaga baxo eurozone.
Dalkaasi Giriiga ayaa waxaa ka jirta mashaqo dhinaca dhaqaalaha ah , waxaana doorashadii asbuucii hore ay su?aal ka keentay kaalinta uu dalkaasi kaga jirayo seyladda agga euro,waxana arrintaasi ay saamayn ku yeelatay suuqyada dhaqaalaha ee caalamiga ah.